Umgangatho we-20, Jonga kwiParque Augusta, Wifi 250Mb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMaelle
Isitudiyo esitsha se-24m2 esinoyilo lwangoku kunye nolusebenzayo, eyilelwe ukunika intuthuzelo epheleleyo kunye nokulula kwiindwendwe, eyilwe ukusuka kwisinxibo esisemgangathweni sehotele, ukuya kwimithombo yobukrelekrele eyenziweyo, ukwenza i-Alexa Echot Dot ifumaneke njenge-concierge yakho yendawo yokuhlala.
Indawo isengomnye umahluko, umbono omangalisayo weParque Augusta entsha, 500m ukusuka kwindlela engaphantsi yaseMackenzie (Yellow Line), ibe yeyona ndawo ifanelekileyo eSampa kushishino, ukuthenga okanye ukuzonwabisa.
Isanda kwakhiwa, isitudiyo sethu se-24m2 sinendawo yasedolophini enezihombiso zangoku kunye nezinto eziluncedo zokwenza ukuba ukuhlala kwakho kungalibaleki.
- Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo.
-Nespresso umenzi wekofu
-I-Hot/Cold Air Conditioning.
- 250 Mb isantya esiphezulu WiFi.
-I-Smart TV 4K 43" kunye ne-Amazon Prime kunye neetshaneli ze-HD ezivulekileyo
I-Alexa Echo Dot-i-Concierge yethu
-Izinto zokuhlambela zaseNatura Ekos
- Ibhedi yehotele eqhelekileyo kunye nelinen yokuhlambela
-Ibalcony ekhazimlisiweyo kunye ne-blackout roller blinds
- Isicoci samanzi
Umbono omangalisayo weParque Augusta yekamva kunye nesona sitrato simiyo, esiphilayo nesimi kakuhle kwisixeko, iRua Augusta!
I-condominium inezakhiwo ezipheleleyo, kwaye kufuneka uhlolisise uphahla (i-Skylounge 27th floor) kunye nombono ophefumulayo we-SP yedolophu, phakathi kwezinye iindawo zokuzonwabisa ezifana ne-swimming pool, i-gym, indawo yokuhlamba impahla, indawo yokusebenza.
QAPHELA: Ukufikelela kwidama lokuqubha kunye nejimu kuvumelekile ngokuqeshwa kwangaphambili. Uphahla olukumgangatho wama-27 lunokwenzeka yonke imihla ukusuka ngo-8:00 kusasa ukuya ku-6:00 malanga ngaphandle kokubekelwa indawo.
QAPHELA2: Icondominium yintsha ineenyanga ezi-6 isebenza, inamagumbi aliqela alungiswayo. Kukho ingxolo emandla enokwenzeka phakathi evekini ukusuka ngo-08:00 ukuya ku-17:00 kunye neMigqibelo ukusuka ngo-08:00 ukuya ku-12:00, asinakuqikelela.
Kwiindwendwe zethu ezifuna ukwenza iofisi yekhaya, sicebisa ukusebenzisa indawo yokusebenzela kumgangatho we-27 ukuze usebenze ngoxolo kwaye ujabulele umbono ongakholelekiyo.
IConsolação sisithili esikumbindi wesixeko saseSão Paulo kwaye yenye yezona ndawo zibalulekileyo zembali nenkcubeko yesixeko.
Kwabo baxabisa naluphi na uhlobo lobugcisa, akuyi kubakho ukunqongophala kwamathuba kwindawo yaseConsolação. Nokuba unokubukela iimuvi kwiimiboniso bhanyabhanya kwiivenkile ezinkulu, okanye amabali elungelo lokushicilela kwi-cinema yaseCaixa Belas Artes okanye nakwisithuba se-Itaú de Cinema. Imizobo kunye nemifanekiso eqingqiweyo inokufumaneka, umzekelo, kwiMasp (Museum of Modern Art). Kubathandi boncwadi, akuyi kunqongophala iivesi, imibongo okanye izitanza kwiCasa das Rosas yodumo.
Umbuki zindwendwe ngu- Maelle
- Idama lokuqubha kunye ne-solarium kumgangatho wama-23
-Uphahla kumgangatho we-27 kunye nemibono emangalisayo yazo zonke iindawo eziphambili zombindi wesixeko.
- Indawo yokusebenzela
-OMO yokuhlamba okwabelwana ngayo (ihlawulwe ngokwahlukeneyo)
>> Ukupaka kwindawo yekhondomu kuhlawulwa ngokwahlukeneyo<< yonke imihla kwisixa-mali se-R$50, qhagamshelana nathi ukuze ujonge ukufumaneka.
Ukufikelela kwidama lokuqubha kunye nejim kuvunyelwe ngokuqeshwa.
-Uphahla kumgangatho we-27 kunye nemibono emangalisayo yazo zonke iindawo eziphambili zombindi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Consolação